Angovo geothermal eto amin'izao tontolo | Green Renewable
Adriana | | Angovo geothermal, Angovo azo havaozina
La angovo geothermal Izy io dia ampahany amin'ny vondrona angovo azo havaozina.
Tsy vaovao ity karazana angovo ity fa ankehitriny dia misy liana lehibe kokoa amin'izao tontolo izao amin'ny fampiasana an'io loharano io.
La ny angovo geothermal dia mampiasa hafanana voajanahary avy amin'ny tany amin'ny alàlan'ny rano ambanin'ny tany izay 4000 metatra farafahakeliny ambonin'ny tany ary misy ny mari-pana ambony noho ny mahazatra.
Tsotra ny fomba fiasa, ilaina ny fandavahana ny tany amin'ireo faritra ara-jeografika manokana misy ny mari-pana ampy, avy eo ampitaina ny rano sy ny etona ary avy eo dia alefa mankany amin'ny turbine iray mifandray amin'ny mpamokatra mpamokatra angovo.
Ny fahalianana bebe kokoa amin'ny angovo madio dia miteraka fisondrotana lehibe amin'ity karazana angovo ity. Ny tombony tena lehibe ananan'izy ireo dia a loharanom-baovao azo havaozina, manome angovo tsy miova, zara raha mamoaka fandotoana ary mitaky toerana kely hametrahana a zavamaniry geothermal.
Ny fatiantoka an'ity loharano ity dia ny faritra sasany amin'ny planeta ihany no misy teboka mafana na faritra jeografika mety hamokarana angovo amin'io fomba io ary lafo ny vidin'ny fananganana.
Amin'izao tontolo izao dia misy mihoatra ny 250 zavamaniry geothermal ary misy tetik'asa na zavamaniry maro isan-karazany an-dàlam-panamboarana manerantany satria ity karazana loharano ity dia manampy betsaka amin'ny fampitomboana ny fahafahan'ny angovo eto an-tany.
Ny loharano geothermal dia mety ho loharano tena mahaliana Firenena mahantra mba ahazoana angovo satria ampahany betsaka amin'ny faritra eto amin'ny planeta izay manana toetra geothermal dia an'ny firenena tsy dia mandroso, indrindra fa amin'ny Africa, Asia ary ny ampahany amin'ny Amerika Atsimo manana fahaiza-manao lehibe izy ireo.
Ny angovo geothermal dia mampitombo ny fahafahan'ny angovo any amin'ireo faritra lehibe manerantany sy ireo firenena toa an'i Shina, manome fidirana amin'ny herinaratra amina olona an-tapitrisany maro.
Mety indrindra ny manambatra ireo zavamaniry hafanana amin'ny karazana loharanom-pahalalana hafa mba hampitomboana ny angovo.
Ny fampiasana loharanom-pahalalana hafa ho tompon'andraikitra dia hanampy betsaka hisorohana ny olana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo geothermal » Angovo geothermal eto amin'izao tontolo izao
adala ps elizabeth